Uwe ejiji eji ejiji eme ihe na Europe, isi okwu ya bụ "ịtọpụ na nnwere onwe". Ihe ngosi ya bụ ọdịdị uwe ndị dị mma, nke mere ka ọ dị mfe ma dị mma, na-enye gị ohere itinye ụdị a maka ejiji kwa ụbọchị. Sweaters na jeans, uwe ndị dị mma na uwe akwa, sweatshirts na T-shirts - ha niile na-adaba ụdị ejiji.
Nwanyị ọ bụla nke oge a na-agbaso ihe oyiyi nke onwe ya, na kwa ụbọchị nke ihe omume ahụ, ọ nwere ike ịkwalite ụdị ejiji maka ụmụ nwanyị. Uwe ndị dị otú ahụ nwere ike ịkọwapụta agwa gị nke ọma, nke mbụ, na nke kachasị mkpa - nnwere onwe zuru oke nke ime ihe. Kwa ụbọchị, ụdị a na-aghọwanye ihe a na-ewu ewu, ihe oyiyi ndị na-ewu ewu na ejiji na-apụta n'okporo ámá nke obodo ndị oge a.
Enweghi ike ibi ndu nke nwanyi nwere onwe ya site na mgbako na usoro nke ejiji, ya, nke mbu, si n'echiche nke onwe ya, ha nwere ike ijikota uwe di iche iche. Otu njirimara nke ihe eji eme ihe bu uzo nke eji eme ememe ma obu uwe, enweghi ihe ndi siri ike ma obu ndi ahia , nakwa ihe ndi di iche iche ma obu ihe di iche iche ndi mmadu jiri kpuchie akpukpo na akwa akwa akpụkpọ anụ . Nnwere onwe na ịdị mfe bụ akụkụ dị iche iche nke onyinyo nwanyi a.
Ụdị nke ọhụụ n'okporo ámá na-enye gị ohere ịghọ onwe gị na oke ime obodo. Nchikota obi ụtọ na nke bara uru nke ụdị uwe dị iche iche, kachasị ihe nile, mee ka ụmụ nwanyị nwee nkasi obi, ma mesie ike na ịma mma ya.
Ọtụtụ ndị inyom achụmnta ego ejiriwo ụdị azụmahịa azụmaahịa, n'ihi na ọ dị mfe ma dị irè. Ụdị nke a dị iche iche nwere ụkpụrụ: "Kwa ụbọchị na ụdị ya dị iche iche." O nweghị ụkpụrụ doro anya na njedebe siri ike na otu esi ele anya.
N'ịbụ ndị na-enweghị ejiji n'emeghị ka ala, ime ihe na-eme ka ụmụ nwanyị nwee ike ịgafe gburugburu ụwa. Na igosipụta àgwà ha doro anya, na-egosipụta n'ụzọ doro anya na ha nwere onwe ha pụọ ​​n'echiche ọha na eze. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ị ga-agbaso koodu uwe akwa, mgbe ahụ, ị ​​gaghị achọta ụzọ dị mma karị ma dịkwuo mfe karị karịa ahịa nkịtị. Ọtụtụ ndị nnọchianya nke ọrụ dị iche iche enwewo ọganihu ogologo oge maka uru ya.
Ụdị nke chic chic na-emesi ịdị nwayọọ pụrụ iche, ịdị mfe, na mmetụta nke nwanyi. E nwere ike ịchọta ihe ndị dị otú ahụ dị iche iche n'ụzọ dị mfe na ụdị a.
Uwe dị iche iche na-eme ka ị gbasaa ngwa ngwa. N'ebe a, enweghi ike inwe mgbakọ na njedebe ọ bụla na nhọrọ nke agba na ịke. A na-eji agba chaa chaa, agba aja ma ọ bụ nwa ojii na-acha ọcha, na-acha ọcha, na -eme ihe eji eme ihe n'ezoghị ọnụ na iche iche dị iche iche. Ịnyịnya na-eji ejiji eme ihe na-achọpụta na ị ga-ebipụ ya, na-ekwusi ike nke onye ahụ, ma ọ bụ na-ezochi adịghị ike ya. Achọpụta nke ọma bụ ụdị ejiji zuru ezu - site n'enyemaka ya, ịhọrọ ụdị uwe mwụda ma ọ bụ ejiji, ị ga-enwe ike ịgbanarị ihe karịrị ibu ma gosipụta ùgwù nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọ nwere ike ịbụ nnukwu anụ elekere nke ajị ọcha, ma ọ bụ corduroy. Isi ihe bụ ịrapagidesi ike na ọlaedo ma ghara imebiga ya ókè na ọnụ ọgụgụ nke akpa, ebu na ihe ịchọ mma. Ihe niile kwesịrị ịdị mma, na-amasị ma n'oge a.
Ịgba egwu egwuregwu na-enye gị ohere ijikọta usoro nke ihe ndị na-emesi ịdị mma nke ọnụ ọgụgụ ahụ ike, ma n'otu oge ahụ, adabala n'àgwà egwuregwu n'eziokwu. Ihe kachasị mma bụ ijikọta nkasi obi na uwe ma wedata okporo ụzọ.
Mee ka onyinyo ahụ dị n'udo na-eme ka ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-ekpuchi, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, isi ejiji, yana eriri na akpa aka dị iche iche.
Ụdị uwe mwụda zuru ezu - ụdị kachasị mma na ejiji
Kedu otu esi ahọrọ nche nche mma?
Kedu ihe ị ga-eji kpuchie okpu ya?
Kedu ihe ị ga-eyi uwe akpụkpọ ụkwụ n'oge oyi?
Kedu ka ị ga-esi maa mma n'emeghi etemeete?
Ejiji na Mma
Kedu ihe ga-eyi uwe iwe mkpụmkpụ?
Akpụkpọ ụkwụ n'okpuru uwe na-acha anụnụ anụnụ
Uwe uwe uwe Japan
Akpụkpọ ụkwụ maka uwe uhie
Kedu ihe m ga-eyi na jeans?
Foto maka ịse foto na studio
25 ihe dị egwu na-eme n'ahụ mgbe ọnwụ gasịrị
Dị ọcha na ndiife na nkà mmụta ọgwụ
Carrots - ọdịnaya calorie
Ngwongwo maka ikpuchi nkuzi
Ntak emi kabeeji seedlings ọkpọọ epupụta?
Osisi oroma - ngwa ngwa na cosmetology na ọgwụ ndi mmadu
Kedu otu esi eme mmiri mmiri maka akwụkwọ edinam?
Gịnị ka igurube na-arọ?
Kedu nsogbu m na-eji Captopril?
Dakota Johnson na Jamie Dornan zutere ma ọ bụ na ọ bụghị?
Achịcha ọka na tomato
Kedu ihe ndị ovaries mebiri?
Mary-Kate Olsen keere òkè na ntụgharị uche banyere edekọ ihe banyere alụmdi na nwunye na Olivier Sarkozy
Ejiji agba nke ntu Polish 2015
Ihe ndị mmadụ na-eme banyere ihe okike